ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ အကျယ်ဖွင့်ဆိုချက် အမေးအဖြေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ အကျယ်ဖွင့်ဆိုချက် အမေးအဖြေ
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ အကျယ်ဖွင့်ဆိုချက် အမေးအဖြေ
Posted by ဆန်နီနေမင်း on Sep 5, 2011 in Buddhism | 12 comments
၁။ အဂမနိယဌာနတာ – မသွားလာအပ်သော အရာဌာနဖြစ်ခြင်း။
၂။ သေ၀နာစတ္တံ – မှီဝဲလိုသော စိတ်ရှိခြင်း။
၃။ မဂ္ဂေနမဂ္ဂပဋိပတ္တိ – မဂ်ခေါ်လိင်ဖြင့် လိင်ထဲသို့ သွင်းခြင်း။
၄။ သာဒိယနံ – သာယာခြင်း။
၁။ အဘိ၊ ဋ္ဌ၊ ၁၊ ၁၄၁၊
၃။ မဃဒေ၀လင်္ကာသစ် အပိုဒ်-၂၃၂
၅။ ဣတိဝုတ်၊ဋ္ဌ၊ ၂၂၀
၆။ ပဋိသံ၊ ဋ္ဌ၊ ၁၊ ၂၀၄
http://www.sanninaymin.com/ တွင်လည်း ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည်။
အရှင်ဘုရား တပည့်တော် မရှင်းသည်မျာကို မေးလျောက်ပါရစေ..။
၁။ ပို့စ်ပါ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံထိုက်သည့် အင်္ဂါရပ်များတွင် မည်သည့်အချက်များသည် ပိဋကတ်တော်လာ၊ အဠကထာကျမ်းလာ ဖွင့်ဆိုချက်များဖြစ်သည်ကို ခွဲခြားသိလိုပါသည်။
မြတ်စွာဘုရားရှင် သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်ကပင် ရာဇဝတ်သားဆိုသူများကို ကွပ်မျက်သုတ်သင်ရာတွင် လွန်စွာရက်စက် ကြမ်းတမ်းလှသော နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ဥပမာ – တံကျင်လျှိုကွပ်မျက်၊ ခြေလက်တဖက်စီကို မြင်းများနှင့်ဆွဲဖြုတ်သတ်။ ဘုရားရှင်က ထိုအခြင်းအရာများကို တားမြစ်ဟန့်တားသည်ဟု အထောက်အထား မတွေ့ခဲ့ဘဲ သူ့ကံနဲ့ သူ့အကျိုး၊ အတိတ်ကံ စီမံခြင်းခံရသည်ဟုသာ နားလည်ထားပါသည်။ ဤသည်မှာ ဘုရားရှင်သည် လူ့ကိစ္စများကို ထဲထဲဝင်ဝင် စွက်ဖက်ခြင်း မပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ထင်ရှားသည့် အထောက်အထားဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါလျက် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံတွင် အသေးစိတ် လိုက်နာဖွယ်ရာ အချက်များ ဖော်ပြထားသည်မှာ ရှေးခေတ်အိန္ဒိယ ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာများ ပါဝင်နေသလားဟု တွေးစရာဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ – ငွေပေးဝယ်၊ စစ်ပွဲသုံ့ပန်း၊ ကျွန်ကိုမယားပြု။
၂။ ထို့ပြင် ပေးထားသော အချက်များ၌ တခုနှင့်တခု အနက်ဖွင့်ဆိုပုံ မတူညီသည်ကို သတိထားမိပါသည်။ ဥပမာ –
၁၄။ စည်းစိမ်ကိုပေး၍ *******aပါင်းသင်းနေသောသူ********။
၁၅။ ရေခွက်၌ လက်ဆုံချ၍ မိဘက ******ပေးစားထားသောသူ*********။
၁၆။ ခေါင်းခုချ၍ ********လင်မယားအဖြစ်နေသောသူ*********။
၁၇။ ကျွန်ကို ********မယားပြုထားသောသူ*******။
စတားပြထားသောအချက်တို့သည် မယားသတ်မှတ်ချက်တွင် တခုနှင့်တခု မည်သို့ကွာခြားသည်ကို သိလိုပါသည်။
၃။ နောက်ဆုံး လျောက်ထားလိုသည်မှာ မယားဟု သိမ်းပိုက်၊ ရယူ၊ ပေးအပ်နှင်း ခံလိုက်ရတိုင်း မယားအရာ မြောက်နိုင်ပါ၏လော။ ဥပမာ – ဝိနည်းလွတ် သိမ်းပိုက်ရယူပြီး (ကျွန်၊ သုံ့ပန်း၊ အကြွေး) လင်ဝတ်တ္တရား အစကထဲက ကျေပွန်ရန် ဆန္ဒမရှိခဲ့လျင်၊ အလုပ်အကျွေးအဖြစ်သာ သဘောထားခဲ့လျင် သူ့မယားအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါမည်လား။ ဘုရားရှင်လက်ထက်က သောတာပန်အမျိုးသမီးတဦး ရှေးရေစက်ကြောင့် သားသတ်မုဆိုးတဦးနှင့် မိဘများသဘောမတူဘဲ အိမ်ယာထူထောင်ခဲ့ကြောင်း ကျမ်းလာများရှိပါသည်။ ထိုအမျိုးသမီးအား ကာမေသုကံနှင့်ပတ်သက်၍ ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဟု ရေးသားချက်မရှိပါ။
အရှင်ဘုရားထံမှ ဖြေကြားချက်နှင့် ရွာသားများထံမှ ထင်မြင်ချက်များကို စောင့်မျှော်လျက်ရှိပါသည်။
အရှင်ဘုရား တပည့်တော်ကြားဖူးသည်မှာ မိမိတရားဝင်ယူထားသော
မိမိတို့ချစ်သူဖြင့် တူနှစ်ကိုယ် ကြည်ဖြူတာကတော့
ဖေါ်ပြပါ အပြစ်တွေမှာ မပါရှိတဲ့အတွက်
လိင်တူချစ်သူများ ကိုယ်စား ကြည်နူးမိပါတယ်ဘုရား
( ထို့ပြင် မိမိမယားပင် ဖြစ်စေကာမူ အောက်ပါအကြောင်း (၄)ပါကြောင့်လည်း ကံထိုက်ပါသည်။
၄။ ဆေးဝါးမှီးဝဲ ရှိမြဲအင်္ဂါထက် လွန်နေခြင်းတို့ပင် ဖြစ်ပေသည်။)
အမှတ်သုံးကတော့ တစ်ရွာလုံး လွတ်ပါ့မလားဘဲတွေးတောစရာပါ
တော်သေးတယ် တပည့်တော်က ရွာသူတို့ရဲ့ အမှု့ဖြစ်သော
အိမ်ထောင် ပြုခြင်း အမှု့ကိုေ၇ှာင်ရှားသူဖြစ်တဲ့အတွက်
ကောင်းသော အမှု့ကိုကျင့်သူပါလားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျေနပ်မိပါတယ်ဘုရား
သဘောကို အနည်းငယ် ချဉ်းကပ်ပြပါခင်ဗျ
ဒါ အများအကျိုး ပရဟိတ အလုပ်လုပ်နေဒါကွ
ဒကာတော် ကြောင်ကြီးရေ ကာမေသုမိစ္ဆာစရကံနှင့်ပတ်သတ်ပြီး မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့ မူရင်းပါဠိတော်က မသွားလာအပ်တဲ့အရာဌာနမှာ မသွားပါနဲ့၊ ကာမပိုင်ရှိသူကို မကျုးလွန်ပါနဲ့စတဲ့ အကျဉ်းပြလောက်သာ ပါပါတယ်။ ဒါဟာလည်း ဦးဇင်းတို့က ဘုရားဟောပါဠိဘာသာရပ်ကို သေချာမပြန်ဆိုနိုင်တာလည်း ဖြစ်ပါမယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း အဋ္ဌကထာဆရာ၊ ဋီကာဆရာ၊ ရှေးဆရာတော်ကြီးများဖြစ်တဲ့ မဃဒေ၀ဆရာတော်၊ တည်တောဆရာတော်၊ ဦးဇနကာဘိဝံသစတဲ့ဆရာတော်ကြီးများက ဘုရားဟောပါဠိဘာသာကို တက်နိုင်သမျှသိရှိနားလည်အောင် ထပ်မံရေးသားခဲ့ကြတာပါ။
တကယ်တော့ ဘာသာတစ်ခုရဲ့စကားကို တခြားဘာသာတစ်ခုနဲ့ပြန်တဲ့အခါ လိုရင်းအဓိပ္ပါယ်အကုန်ကို မပြန်ဆိုနိုင်ကြတာ များပါတယ်။ ခုခေတ် အင်္ဂလိပ်စာဘာသာသုံးဖြစ်တဲ့ love-ဆိုတာကို မြန်မာလို အချစ်လို့ပဲ များသောအားဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့လူမျိုး သူတို့ဘာသာစကားအရမှာတော့ အဓိပ္ပါယ်အများကြီး ရှိပါသေးတယ်။
ဒါကို တချို့က အဋ္ဌကထာဆရာတော်များရေးတဲ့ဟာက တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဘာ့ကြောင့် မတူတာလဲ။ အဋ္ဌကထာဆရာများရဲ့စကားကို ယုံကြည်ဖို့ မသင့်ဘူးလို့ ပြောကြပါသေးတယ်။ ဒါဆို အင်္ဂလိပ်စာကို မြန်မာလိုဘာသာပြန်တဲ့ အဘိဓာန်စတဲ့စာအုပ်တွေမှာရော ဘာ့ကြောင့် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မတူကြတာလဲ။ ဒါကိုလည်း စဉ်းစားရမှာပါ။
တကယ်တော့ အဋ္ဌကထာဆရာများရဲ့စကား၊ ဋီကာဆရာများရဲ့စကားကို ကမ္ဘာကဉာဏ်အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ခံရတဲ့ မင်းကွန်းဆရာတော်၊ လယ်တီဆရာတော်တို့တောင် အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာဆရာတော်တို့လောက် ဘုရားဟောပါဠိစာများကို မကြံဆနိုင်၊ မတွေးတောနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ဆရာတော်များကတောင် အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာဆရာများရဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်များကို လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါကို မိမိတို့ဘာမဟုတ်တဲ့ဉာဏ်လေးရှိတဲ့လူက ယုံကြည်စရာမဟုတ်ဘူး။ ယုံကြည်ဖို့မကောင်းဘူးလို့ ဘာ့ကြောင့်များ ပြောရတာလဲ။ ဘယ်လိုသက်သေပြနိုင်လို့လဲ။ အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာဆရာများထက် ပိုပြီး ဘုရားဟောများကို ဖွင့်ဆိုကြံဆနိုင်လို့လား။ ဒါမှမဟုတ် မင်းကွန်းဆရာတော်၊ လယ်တီဆရာတော်တို့ထက် ဉာဏ်များကောင်းနေကြလို့လား။ အဲဒီတော့ မိမိမကြံဆနိုင်၊ မတွေးတောနိုင်၊ မဖွင့်ဆိုနိုင်ရင် မယုံကြည်သင့်ဘူးလို့ မပြောသင့်ပါ။ မိမိစိတ်ကို မိမိသာလျှင် အစိုးရသည်မို့ မိမိဘာသာ စိတ်ထဲက မယုံကြည်လျှင်တော့ မယုံကြည်ပါနဲ့လို့ပဲ ပြောရပါစေ။
ဒကာတော်ကြောင်ကြီးရဲ့ မေးခွန်းများကို ဦးဇင်းတက်နိုင်သလောက် ဖြေပေးပါမယ်။
(၁) ဘုရားရှင်ဟာ အာဏာရှင်ဘုရင်များရဲ့ အမိန့်ဖြင့် အပြစ်ရှိလို့ သတ်ဖြတ်ခံရသူကို မသတ်ပါနဲ့ ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ ပြောပြခြင်း မရှိခဲ့တာ အမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာ အပြစ်များတယ်ဆိုတာကတော့ တေမိဇာတ်ကို ဖတ်ဖူးလျှင် ဘုရားလောင်းက ဘယ်လောက်အပြစ်များတယ်ဆိုတာ ပြောခဲ့တာကို သိပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခုက သူများလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကို ဘုရားရှင်က ၀င်ရောက်နှောက်ယှက်ခြင်း မလုပ်ပါဘူး။ သူ ဒါလုပ်ရင် ဒီလောက်အပြစ်တွေ ခံစားရမယ်။ နောက်လူတွေ ဒါမျိုးမလုပ်နဲ့လို့ တခြားလူတွေကိုပဲ ဟောခဲ့တာပါ။ ဘုရားရှင်က သူများလုပ်မဲ့ဟာကို တားခဲ့မယ်ဆိုရင် အဇာတသတ်လည်း သူ့အဖေကို သတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်သလို ဒေ၀ဒတ်လည်း ဘုရားရှင်ကို ပြစ်မှားမိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားရှင်သာ တကယ်သူများလုပ်တာကို လိုက်တားနေမယ်ဆိုရင် သဗ္ဗညုတဉာဏ်နှင့်ကြည့်ပြီး အကုန်တားလို့ရပါတယ်။
(၂) မှာမေးထားတဲ့ မတူညီတဲ့အချက်များက ရှေးဆရာတော်များရဲ့ စကားအသုံးအနှုံး မတူတာပါ။ တကယ်တော့ အဓိပ္ပါယ်ချင်းကတော့ အတူတူပါပဲ။ ခုခေတ်မှာလည်း တချို့က ချောတဲ့ကောင်မလေးကိုမြင်ရင် မိုက်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ တချို့ကျတော့လည်း လန်းတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပါယ်ကတော့ လှတယ်ချောတယ်ဆိုတာကိုပဲ ပြောကြတာပါ။ အဲဒီလိုပါပဲ
စည်းစိမ်ပေးပေါင်းသင်းတယ်ဆိုတာ ယခုခေတ် မိန်းကလေးက သဘောမတူဘဲ မိဘကိုစည်းစိမ်ပေးပြီး သိမ်းပိုက်ယူတာမျိုးကို ပြောတာပါ။ ဒါဟာလည်း ယခုခေတ်မှာ ပြုလုပ်နေပါသေးတယ်။
ရေခွက်လက်ဆုံးချပေါင်းတယ်ဆိုတာ မိဘကဖြစ်စေ အကိုအမတို့ကဖြစ်စေ ချစ်သူနှစ်ယောက်ကို သဘောတူတယ်ဆိုပြီး လက်ချင်းဆက်ပြီး ပေးစားတာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။
ခေါင်းခုချ၍ပေါင်းသင်းတယ်ဆိုတာ ခေါင်းရွက်ပြီးဟင်းသီးဟင်းရွက်စတာတွေ ရောင်းစားနေရတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ယောက်ျားလေးက မင့် ဒါတွေလုပ်ရတာ ပင်းပန်ပါတယ်။ မင့်မလုပ်ပါနဲ့တော့။ မင့်ကို ကိုယ်ပဲ ထာဝရလုပ်ကျွေးပါမယ်ဆိုပြီး ပေါင်းသင်းတာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။
ကျွန်းကိုမယားပြုတယ်ဆိုတာကတော့ ယနေ့ခေတ် အိမ်ဖော်ကောင်မလေးကို အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ မုဆိုးဖိုးကဖြစ်စေ၊ လူပျိုကြီးကဖြစ်စေ၊ တခုလက်ယောက်ျားကဖြစ်စေ အိမ်မှာပဲအမြဲခေါ်ထားပြီး ပေါင်းသင်းနေထိုင်တာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။
တကယ်တော့ အထက်ကပေါင်းသင်းနေထိုင်မှုတွေဟာ လူသိရှင်ကြားဖော်မပြဘဲ ပေါင်းသင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေကို ဆိုလိုတာပါ။ ယနေ့ခေတ် ချစ်သူများခိုးပြေးပြီး ရုံးတက်လက်မှတ်ထိုးယူကြတာတွေလည်း အဲဒီထဲမှာ ထည့်လို့ရပါတယ်။
၃။ မိန်းကလေးဆိုသည်မှာ အားနွဲ့ပါတယ်။ လုပ်စားဖို့လည်း ခက်ပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်း ဘ၀မှာရှင်သန်ဖို့လည်း ခက်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ယောက်ျားတစ်ယောက်က ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်စေ သူ့ကိုပေါင်းသင်းပါမယ်ဆိုရင် များသောအားဖြင့် မိန်းကလေးတွေဟာ စိတ်မပါသော်လည်း လက်ခံရတာ များပါတယ်။ ဥပမာ-အိမ်ဖော်တစ်ယောက်ကို အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားက အနိုင်ကျင့်ပြီး ငါ့မင့်ကို တရားဝင်ယူပါမယ်လို့ပြောရင် အဲဒီအိမ်ဖော်မိန်းကလေးဟာ အားကိုးရာမရှိပါက စိတ်မပါသော်လည်း လက်ခံရတာ များပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဇနီးမယားဖြစ်သွားရပါတယ်။
သောတာပန်အမျိုးသမီး မုဆိုးနှင့်အိမ်ထောင်ကြတာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှစ်ယောက်လုံးဟာ လွတ်လပ်သူဖြစ်လို့ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ မထိုက်ပါဘူး။ ဒါ့ပြင် သောတာပန်ဆိုတာကလည်း တဏှာရာဂမကုန်သေးတဲ့အတွက် အိမ်ထောင်ပြုလို့ရပါတယ်။
ကိုင်း စာလည်းများသွားပြီ။ ထပ်မရှင်းတာများ ရှိပါက ထပ်မံမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ဦးဇင်းလည်း ပြည်ပမှာပညာသင်နေတာမို့ ပလ္လင်ပေါ်တက်တရားမဟောနိုင်သေးလို့ အွန်လိုင်းကနေပဲ တက်နိုင်သမျှ၊ သိသမျှလေးကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ပညာပါရမီဖြည့်ရင်း သာသနာတိုးတတ်အောင် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာစွာဖြင့် လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်………။
တကူးတက ဖြေကြားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါသည် အရှင်ဘုရား။ အမြင်မတူသည်များကို ဖယ်ထားပြီး အမြင်တူသည်များကို လျောက်တင်ရလျင် ဘာမှပြောစရာ မရှိပါဘုရား။ သို့ကလို ဆိုပါက သဂျီးထံမှ ကျနော်သုံးကျပ်၊ အရှင်ဘုရားလည်း နဝကမ္မ ခုနှစ်ကျပ် ရရန်မသေချာ၍ အနည်းငယ် အထွန့်တက်ပါမည်။
အထူးအားဖြင့် အမှတ်(၂) လူသိရှင်ကြား ဖော်မပြတဲ့ ပေါင်းသင်းနေထိုင်မှုမျိုးဆိုပါလျင် ယနေ့ခေတ် လက်မထပ်ပဲအတူနေ၊ ရံဖန်ရံခါနေ အတည်တကျ စုံတွဲများလည်း အကြုံးဝင်နိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာ အဋ္ဌကထာဖွဲ့ဆိုခြင်း သဘောသဘာဝ၏ အားနည်းချက် ဖြစ်ပါသည်။ အားသာချက်မှာ ခေတ်နှင့်လျော်ညီစွာ ဆုံးမပဲ့ပြင်နိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ တပည့်တော် ပုဂ္ဂလိက အနေဖြင့်ကတော့ အဋ္ဌကထာ ဖွင့်ဆိုချက်များအပေါ် အရှင်ဘုရားပြောသလို ယူနိုင်သည်ကိုယူ မယူနိုင်သည်ကို မယူယုံ ရှိပါသည်။ စော်ကားပြစ်တင်လို စိတ်မရှိသလို လိုအပ်လာလျင်လည်း ဝေဖန်သုံးသပ်ဖို့ ဝန်မလေးပါကြောင်း ရိုသေစွာလျောက်ထားအပ်ပါသည်။
– ကမ္ဘာကဉာဏ်အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ခံရတဲ့ မင်းကွန်းဆရာတော် ?????
The world appreciates “မင်းကွန်းဆရာတော်” memory only.
( I think Pentium I computer can do the same memory job )
The world never appreciates “မင်းကွန်းဆရာတော်” in ideology & philosophy.
“မင်းကွန်းဆရာတော်” made any invention of idea or philosophy ???
– အဋ္ဌကထာ ဖွင့်ဆိုချက်များအပေါ် ယူနိုင်သည်ကိုယူ မယူနိုင်သည်ကို မယူယုံ ရှိပါသည်
– လိုအပ်လာလျင်လည်း ဝေဖန်သုံးသပ်ဖို့ ဝန်မလေးပါကြောင်း
အရှင်ဘုရားရေးတာတွေဖတ်ကြည့်ရသလောက် အရှင်ဘုရားက နှာစေးချောင်းဆိုးရောဂါမရှိပဲ ကျန်းမာစွာဖြင့် ဘာသာ သာသနာအတွက် အလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ တပည့်တော် ထင်ပါတယ်ဘုရား …
အရှင်ဘုရားရေးတဲ့ပို့စ်တွေကို ဖတ်ကြည့်ဖြစ်ပေမယ့် အထူးတလည် အမြင်မတူစရာ မတွေ့ခဲ့လို့ ကွန်မန့်မပေးဖြစ်ခဲ့ပါ … အားပေးနေပါကြောင်း အသိပေး လျှောက်ထားအပ်ပါသည် …
ငါးပါးသီလကို.. အဋ္ဌကထာ၊ဋီကာဆရာပြန်ဖွင့်ချက်တွေမပါ..တခြားငယ်ဖြူဆရာတော်ကြီးတွေပြန်ရှင်းပြတာမဟုတ်ပဲ.. မူရင်းပါဠိတော်ကအတိုင်း… တိုက်ရိုက်မြန်မာလို ပြန်ရေးထားတာများရှိရင် ဖတ်ချင်မိပါတယ်ဘုရား..။
အရှင်ဘုရား ကျေးဇူးကြီးပါတယ်။ခုလိုမျိုး များများရေးပေးပါဘုရား။
ဟုတ် ဒကာ ကြောင်ကြီး၊ ယခုခေတ် Living together ဆိုတဲ့အတူနေမှုများဟာ နှစ်ဦးသဘောတူလည်းဖြစ်မယ်။ မိန်းကလေးဘက်ကလည်း အုပ်ထိန်းသူမရှိ၊ ပိုင်ရှင်မရှိဖြစ်ရမယ်။ ယောက်ျားလေးကလည်း လူလွတ်ဖြစ်ရမယ်။ အဲဒါမှသာ ကံမထိုက်မှာပါ။ အဲဒီလို မိန်းမယောက်ျားနှစ်ဘက်လုံးမှာ ချို့ယွင်းချက်ရှိရင်တော့ ကံထိုက်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း ယခုခေတ်မှာ နားမလည်လို့လား၊ သိသိကြီးနဲ့မိုက်နေကြတာလားဆိုတာတော့ မပြောတတ်ပေ။
ငါးပါးသီလကို မြတ်ဗုဒ္ဓဟောတော်မူခဲ့တဲ့ပါဠိတော်အတိုင်း သိချင်ဖတ်ချင်လေ့လာချင်ပါက သံယုတ္တနိကာယ်၊ သဂါထာဝဂ္ဂသံယုတ်၊ အဘိသမယ၀ဂ်၊ နခသိခသုတ်ထဲတွင် ငါးပါးသီလ၊ ရှစ်ပါးသီလအကြောင်းများကို ဟောကြားတော်မူခဲ့တာရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ လေ့လာလိုက်ပါ Kai ရေ။